★Escape & Nethezeka★ | I-Farm Stay Yurt Glamping Getaway
Okuhlangenwe nakho okukhethekile kwe-glamping epulazini elicezile elingaphansi kwedolobha labantu abakhempa, abagibeli bamabhayisikili, nabathandi bemvelo. Jabulela ukuba wedwa, ezothando (izithandani), noma isikhathi somndeni futhi ukhuthazwe imvelo. Itholakala epulazini lomndeni elingamahektare angu-7, le yurt ebanzi engu-16 ft diameter ikulethela okuhamba phambili kwamatende okunethezeka nokulima ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa lwe-glamping. Khetha amakhambi nemifino emisha, izilwane ezifuywayo, noma ugibele intaba/ukugibela ibhayisikili epaki yesifunda esingamahektha angu-200 eduze nomfula nomfudlana.
I-ambiance ebabazekayo ye-farm glamping ihambisana nethende eliyingqayizivele lesitayela se-yurt elilungele ukukuhlalisa ngenkathi ujabulela ukuthula nokuthula kwalesi silungiselelo semvelo esihle.
Ithende le-glamping elibanzi limiswe ngokuphelele, ngakho-ke ungakwazi ukuphumula ngokushesha nje lapho ufika nangemva kosuku lokuzidela okujabulisayo kuyo yonke indawo yemvelo ebabazekayo. Vuka uzwe izinyoni ezitshiyoza bese uphumela ngaphandle ukuze ugcakele elangeni futhi ubuke ukubukwa kwemvelo.
★ Ngaphakathi Etendeni ★
Ngaphakathi kweyurt engu-16 ft ububanzi uzothola ukufinyelela kuzinsiza zesimanje ezihlanganisa ugesi (ilanga), umbhede wendlovukazi othokomele owenziwe ngegwebu lenkumbulo, amafeni angu-2, igriddle (propane), kanye ne-heater yesitofu sezinkuni (ebusika). Itende libanzi, lizolile, lihlinzeka ngokuhlolwa kweziphazamisi futhi alimelana nesimo sezulu ngokuphelele. Itende limbozwe omata athokomele ukuze uthole ukunethezeka kwakho futhi lizungezwe izibani zelanga ukuze uzijabulele ebusuku lapho umlilo ucishiwe. Iyunithi yezinhlamvu zamalambu okukhanya enganekwane ahlobisa ingaphakathi letende futhi lengeza ukuthinta okumangalisayo.
Lindela ukuthola okunethezeka kwe-glamping kanye nolwazi lokuhlala epulazini. Ngaphandle kwezinye izinsiza ezengeziwe esizifakile, okokulala okuwubukhazikhazi, nekhishi elincane elingaphakathi kwetende, lokhu okwenziwa ngaphandle kwegridi.
★ IZINTO EZINKULU ★
Idizayini enemibala yetende inikeza isisekelo esinethezekile sohambo lwakho. Sithathe ukunakekela okukhethekile ukuyihlomisa ngazo zonke izinto ezibalulekile ukuze ihlinzeke ngokuhlala okungenakunakekelwa.
✔ Umbhede Wendlovukazi Onethezekile onemicamelo, amalineni, namaSpredishithi
✔ Isikhwama Sobhontshisi Othokomele & Ama-Ottoman
✔ Ukukhetha Incwadi
✔ Isitofu Esishiswa Ngokhuni
✔ I-Propane Stove Top
✔ Izibuko, Izitsha, Amabhodwe namapani
★ Ngaphandle Kwetende ★
Indawo engaphandle inikezela ngezinsiza ezengeziwe ukuze uthole ukunethezeka okuphezulu, ukunethezeka, nokuphumula lapho ungacwiliswa khona ngokukhululekile endaweni engokwemvelo emangalisayo.
✔ Umgodi Womlilo (izinkuni zinikeziwe)
✔ Indawo yokuhlala enethebula nezihlalo
✔ Indlu Yangasese Evalekile Yomquba, Ishawa Yangaphandle Nosinki
Jabulela uhlaza oluluhlaza, indawo enhle nemvelo ngaphandle nje kwetende lakho. Ekuseni phuza itiye njengoba uhlezi endaweni yethu ye-bistro yabantu ababili futhi ulalele umsindo wezinyoni eziculayo, iqhude lethu elikhalayo nezikhukhukazi ezizalelayo. Ntambama thatha isihlwathi esivilaphayo endlini yethu yokulala ngaphansi komthunzi wezihlahla ezimbili njengoba ubuka izimbuzi nezimbongolo ziklaba idlelo. Noma phuma ugibele izintaba noma ugibele ibhayisikili endaweni eseduze yepaki yezwe engamahektare angama-200 bese ulandela ngomnyango olandelayo nje ezinyathelweni zakho. Ebusuku zipholele ngasemgodini womlilo futhi ujabulele umlilo ovuthayo noma ujabulele ubusuku obupholile nobupholile ubuka izinkanyezi! Uzothola ithuba lokuthatha ubuhle obuluhlaza bemvelo ngaphandle okumangalisayo ngesikhathi sokuhlala kwakho okunomusa.
✔ Izinyathelo ezisuka epaki nomzila wombuso wamahektha angu-200 onomfula futhi oxhuma eSweetwater Creek owaziwa kakhulu.
✔ Khetha amakhambi amasha ngaphandle nje kwetende lakho (irosemary, basil, utamatisi, i-lemongrass).
✔ Izivakashi zingafunda ngezinyosi, zifunde ukusenga imbuzi, ukubamba itshwele, noma ukuphakela izimbongolo nezimbuzi (kufanele kuhlelwe nomninikhaya).
Itende libekwe epulazini elicezile elingaphansi kwedolobha e-Powder Springs, GA. Le ndawo enhle ilungele abakhempa, abagibeli bamabhayisikili, nabathandi bemvelo, njengoba ikuvumela ukuthi ujabulele ukuthula nemisindo yemvelo. Lesi silungiselelo esihle sikwenza ukwazi ukubalekela ukuphithizela kwansuku zonke futhi ujabulele ubuhle bemvelo obuzungeze le ndawo kuyilapho usahamba ibanga elingaphansi kwamaminithi angu-40 ukusuka e-Atlanta, GA.
Sizofinyeleleka 24/7 ezivakashini zethu ngocingo, umbhalo, noma ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb.
Lindela impendulo esheshayo nesheshayo. Sinikeza izivakashi zethu indawo kodwa siyatholakala kuyo yonke imibuzo.
Xhumana nathi manje ukuze siqale ukuhlela iholide lakho elihle!
Lindela impendulo esheshayo nesheshayo. Sinikeza izivakashi zethu indawo kodwa…